Nagarik News - धार्मिक सहिष्णुताको पाठशाला
हिन्दुका भगवान शिव, बौद्धमार्गीका गुरु पद्मसंभव र किराती पुर्खा रैछाकुलेसँग जोडिएको हलेसी। महादेवस्थान–४ खोटाङको भूमि। धार्मिक सहिष्णुताको नमुना पाठशाला। मनोकामना पूरा हुने विश्वासमा बर्सेनि हजारौं तीर्थालु त्यहाँ पुग्छन्। पूजापाठ गर्छन्। ध्यानमा बस्छन्।
भौगोलिक विकटताले केही वर्षअघिसम्म सजिलो थिएन हलेसी यात्रा। अचेल काठमाडौंबाट हलेसीसम्मै गाडी चल्छन्। बनेपा–बर्दिबास सडकको खुर्कोट खण्डबाट मध्यपहाडी लोकमार्ग छिचोलेर घुर्मी हुँदै।
हामी पनि ०७० फागुन २० गते त्यो पुण्यभूमि पुग्यौं।
पूर्वका पशुपतिनाथ हलेसीबारे सानैमा सुनेको थिएँ। धेरै पछि थाहा पाइयो, हलेसी त्रिधार्मिक केन्द्र पो रहेछ। साथीहरू रञ्जन राजभण्डारी, गोपाल श्रेष्ठ र म हलेसी बसपार्क पुग्यौं। काठमाडौंबाट जीप चढेर त्यहाँ पुग्न १० घन्टा लाग्यो।
दुरीका हिसाबले काठमाडौंदेखि पोखराभन्दा अलिकति मात्रै बढी रहेछ हलेसी। काठमाडौं–हलेसी २१६ किमि। चाबहिलबाट बिहान ५ बजे छुटेको टाटा सुमोले हामीलाई हलेसीमा ओराल्दा दिउँसो ३ बजेको थियो।
बाटो कतैकतै कच्ची छ। पक्की बनेपछि ७–८ घन्टामा पुग्न सकिएला! काम हुँदैछ। योजनाअनुसार सडक पक्की हुने समय तीन वर्ष। त्यसपछि हलेसीमा तीर्थालुको भीड थेगिनसक्नु हुन्छ।
हामी गुफा हेर्न हतारियौं। बसपार्क बजार छिचोल्यौं। घोडेटो दायाँ–बायाँ स–साना गेष्टहाउस। पसलबाहिर नाङ्लामा खुर्सानी र बदाम। हलेसीको कोसेली। सरासर गुफातर्फ मोडियौं। गुफा प्रवेशद्वारमा गणेश मन्दिर र मारातिका गुम्बा। छेउमा धुपबत्ती बेच्ने पसलहरू।
पुजारी खलकका गोपाल गिरीले हामीलाई गुफा घुमाए। हलेसीको क्षेत्रफल २६ रोपनी। हलेसी क्षेत्रमा मुख्य दुई ठूला गुफा छन्। हलेश्वर र बसाहा नाउँका। हामी पहिला हलेश्वर छिर्यौं। चट्टाने पहरामा अजंगको गुफा। सिँढीबाट ओर्लेर जानुपर्ने। गुफाको एक छेउमा बौद्धमार्गी पूजापाठ गरिरहेका। अर्को छेउमा हिन्दु।
जुत्ता फुकालेर भित्र पस्यौं। गिरीले हामीलाई हलेश्वर महादेव मूर्ति चिनाए। चुन ढुंगाले बनेको शिवलिंग। हामीसँग फूल–अक्षता केही थिएन। हात जोड्यौं। भगवानलाई मनफूल चढायौं।
त्यहाँ थुपै्र प्राकृतिक मूर्ति छन्। गणेश, कुमार र पार्वतीका। अग्ला मूर्ति द्वारपालका। एउटा सानो र ठूलो मूर्ति देखाउँदै गिरीले भने, ‘छोरा नहुनेहरू यहाँ ढोग्छन्।' सन्तानेश्वर भन्ने थाहा पाउनेबित्तिकै रञ्जन दाइले ढुंगामा ढोगे। ‘लौ तपाईंले छोरै पाउनुहुन्छ,' गोपाल दाइ र मैले जिस्कायौं।
छोरा पाएपछि हलेश्वर आउनेको संख्या ठूलो भएको गिरीले सुनाए। हलेसी दर्शनले दुःखबाट मुक्ति मिल्ने, पदोन्नति हुने, खडेरीबाट बचिने, सन्तान लाभ हुने र निरोगी हुने जनविश्वास छ।
गुफामा हामीले चमेराका आवाज सुन्यौं। शान्त गुफा। बाहिरिन मन मानेन। फोटा खिचिरहेको थिएँ। कसैले कोट्यायो, ‘हाम्रो पनि खिचिदिनूस् न।'
यसो फर्केको त वासुदेव कार्की रहेछन्। हामी आएकै जीपका यात्रु। सिन्धुलीको बितिजोर गाविस, हर्कपुरका बासिन्दा। काठमाडौंका साना व्यापारी। उनको समूहमा ५ जना थिए। सबैका तस्बिर खिचिदिएँ।
उनीहरू प्राकृतिक पशुपतिनाथ हेर्न आएका। ‘यसरी मोटरमा आउन पाइएला जस्तो लागेकै थिएन,' कार्की फुरुंग बने, ‘बाउबाजेलाई हलेसी दर्शन गरेर फर्कन ६ दिन लाग्थ्यो।'
त्यहाँ विदेशी पनि भेटिए। ताइवानी नागरिक। बौद्धमार्गी। उनीहरू धर्मद्वार, जन्मद्वार र पापद्वार पस्न थाले। धर्मात्मामात्रै छिर्छन् रे। गोपाल दाइ सजिलै छिरे। हामीले प्रयासै गरेनौं। जतिले प्रयास गरे कोही अड्केनन्। सबै धर्मात्मा! जिउको ‘एंगल' मिलाए मोटा हुन् या दुब्ला, सजिलै छिर्छन्।
गुफामा सिँढी चढेपछि पार्वतीको मूर्ति भएनेर पुगिन्छ। महादेवभन्दा पार्वती मोटी! पार्वतीलाई बौद्धमार्गी आयु कलश मान्छन् भने हलेश्वर महादेवलाई धर्मपाला (गुफारक्षक) का रूपमा पुज्छन्। मूर्ति तिनै हुन् तर धर्मपिच्छे फरक नाउँ।
हामी हलेश्वर गुफाबाट बाहिरियौं। त्यसको सय मिटर पश्चिममा बसाहा गुफा छ। हलेश्वरभन्दा लामो र विशाल। मुखमै बसाहा। भित्तामा फुक्दा शंखध्वनि निक्लिन्छ। आमासँग बत्तीको व्यापारमा बसेकी शुष्मा परियारले ढुंगामा फुकिन्, दुरुस्तै शंखको आवाज निक्लियो।
भित्ताभरि थरीथरीका आकृति। गुरु पद्मसंभव र शिवसँग सम्बन्धित। गाइका थुन। कमलको फूल, गणेश, कुमार आदि। करिब दुई सय मिटरभित्र पुगेपछि माथि खुला आकाश देखिन्छ। त्यहाँ माथिबाट डोरीमा तल झर्ने र्या प्लिङ खेल्न मिल्छ।
हलेश्वरमा निःशुल्क प्रवेश पाइन्छ। बसाहामा १० रुपैयाँको टिकट काट्नुपर्छ। दुवै गुफा भएको पर्वतलाई बौद्धमार्गी अवलोकितेश्वर पर्वत मान्छन्। बसाहा अघिल्तिरको बज्रपाणी र उत्तरपट्टिको मञ्जुश्री पर्वत। ती डाँडा बौद्ध मन्त्रसहितका ध्वजापताकाले झिलिमिली छन्।
गुफामा शिवरात्रि, रामनवमी, बालाचतुर्दशी, तीज, उभौली र उधौलीमा मेला लाग्छ।
हामी गुफा घुमेर बासको खोजीमा लाग्यौं। हलेसीमा पानीको दुःख छ। काठमाडौंमा संस्कृति पढाउने प्राध्यापक हरि श्रेष्ठले रोयल होटलमा बस्नु भनेका थिए। हलेसीकै ठूलो होटल रोयल प्याक भइसकेछ। हामी सौरभ गिरीको डुङदेलो रिसोर्टमा बस्यौं। शौचालय जडित कोठाको १२ सय रुपैयाँ तिरेर।
मध्यम खालका होटल/लज छन्। हलेसी महादेव मन्दिर व्यवस्थापन समितिका उपाध्यक्ष कुलदीप गिरीका अनुसार ५ सयजना एकैपटक रात बिताउन सक्छन्। होटल रोयल, डुङदेलो रिसोर्ट, शिवदर्शन गेष्ट हाउस, अनिता होटल, जगत होटल, हरि राई होटल, बस्नेत होटल आदिमा। केही धर्मशाला पनि छन्।
हलेसीको ख्याति बढ्दो छ। तीर्थालु बढ्दै जाँदा होटल/रेस्टुँराजस्ता पूर्वाधार थपिँदै जान्छन्। हलेश्वर महादेवको कथा रोचक छ। उहिल्यै बृकासुर (भस्मासुर) राक्षसले कठोर तपस्या गर्योन। बृकासुरले ‘मैले जसको टाउकामा हात राख्छु त्यो भस्म होस्' भन्ने वरदान माग्यो। महादेवले तथास्तु भनिदिए।
बरदान पाएपछि बृकासुरले महादेवलाई नै भस्म गर्न खोज्यो। महादेव भाग्दैभाग्दै हलेसी आइपुगे। गुफामा लुके। बसाहा गुफाको मुखमा भगवान विष्णु पार्वतीको रूप धारण गरी बसे। राक्षसलाई पार्वतीले भनिन्, ‘महादेवलाई मैले त्यागिदिएँ, अब तिमीसँग बिहे गर्छु।'
बृकासुर मख्ख पर्यो । उनले गाँजा र भाङ दिइन्। गाँजा र खुसीले मातेपछि दुवै नाच्न थाले। पार्वतीले भनिन्, ‘म नाच्दा जे जे गर्छु, तिमी पनि त्यसै गर्नू।' उनी आफ्नो खुट्टाबाट माथि–माथि छुँदै नाचिन्। र, टाउकामा हात राखिन्। बृकासुरले त्यसै गर्योि। जब उसले टाउकोमा हात राख्यो, आफैं भस्म भयो।
त्यति बेलैदेखि गुफामा महादेवको बास भएको मान्यता छ।
किराती हलेसीलाई पितृका रूपमा पुज्छन्। हलेसी जाँदा मोबाइलमा एकपछि अर्को म्यासेज आइरहेको थियो। कृषिविज्ञ मदन राईले हिन्दु, बुद्ध र किरातीका जानकारहरूको नम्बर पठाए। प्रत्यक्ष भेट भइनसकेका र फेसबुकले जुराएका मित्र मदन दाइलाई धन्यवाद।
किरातीको कथा बुझ्न हामी पत्रकार टिवन राईको स्टेशनरी पसल पुग्यौं। टिवनका अनुसार किरातीका आदि पुर्खा रैछाकुले हलेसी गुफामा बसेका थिए। रैछाकुलेका विभिन्न नाम छन्, खोक्चिलीपा, हेत्छाकुप्पा आदि। गुफा आउनुअघि उनी तुवाचुङ डाँडामा बस्थे। हलेसीबाट उत्तरपूर्व दिक्तेल जाने दिशामा दुई घन्टा हिँडाइमा तुवाचुङ पुगिन्छ।
रैछाकुलेका दुई दिदी थिए तयामा र खियामा। एक दिन गिठा भ्यागुर खाएपछि रैछाकुले मात्यो। उठ्दै उठेन। दिदीहरूले सम्झे, भाइ मर्यो।। उनीहरू विरक्तिए। तयामा तराई लागिन् भने खियामा हिमालतिर।
जब रैछाकुले ब्युँझिए। दिदी नदेख्दा विरक्तिए । ओरालो झरे। हलेसी गुफा आइपुगे। त्यहीँ बस्न थाले। ठूलो भएपछि उनले दिदीको खोजी गरे। एउटा भाले कुखुरालाई लेकमा पठाए। बाहिरबाट फर्केर दिदीबहिनी तुवाचुङमा कपास खेती गरी बसेछन्। कपडा बुन्न थालेछन्।
भालेसँगै उनीहरू गुफा आए। माइती र चेलीको पुनर्मिलन भयो। त्यो खुसीयालीमा उनीहरूले मुन्धुम गाउँदै ढोल झ्याम्टा बजाएर साकेला सिली नाचे। त्यही समयदेखि साकेला नाच्न सुरु भएको मानिन्छ। उभौली र उधौलीमा ओखलढुंगा, सोलु, भोजपुर, उदयपुर र खोटाङका किराती हलेसीमा नाच्छन्।
बिहान खाना खाईवरी हामी तुवाचुङ लाग्यौं। घमाइलो दिन। परपर हिमाल देखिए। डाँडामा तानढुंगा। तयामा र खियामाले कपडा बुनेको ढुंगा। रमाइलो डाँडा।
हलेसी प्रतिष्ठानले गुफा नजिकै किरात संग्रहालय बनाउँदैछ। संग्रहालयअगाडि किराती राजा यलम्बरको मूर्ति राख्ने योजना सुनाए टिवनले। खुशी लाग्यो।
टिवन हलेसी गाइड बुक लेख्दैछन्। त्यसले यात्रुलाई सजिलो बनाउनेछ। हलेसी तीर्थबारे जानकारी दिने सूचना केन्द्र बनाउन पनि ढिलाइ गर्नु हुँदैन। गुफा आइपुग्नेलाई तुवाचुङ उकाल्न सके दुई रात सजिलै हलेसी क्षेत्रमा बिताउँछन्। सामान्यतः हिन्दु हलेसीमा एक रात बसेर फर्कन्छन्। ध्यानमा बस्नेहरू धेरै समय बिताउँछन्।
त्रिधार्मिक संगम भएकाले हलेसीको महŒव बढी छ। धर्मावलम्बी मिलेर बसेका छन्। ‘हामी मिलेर आएका छौं,' मारातिका गुम्बाका प्रमुख खेन्पो कर्म वाङचुक शेर्पा भन्छन् ‘हामीबीच विवाद छैन। आ–आफ्नै ढंगले पूजापाठ गर्छौं।'
हलेसी तीर्थ परम्परा सत्य युगदेखि सुरु भएको राधेश्याम भट्टराईको तीर्थ काव्य ‘हलेसी'मा उल्लेख छ। सत्य युगमा विष्णुले हलेसी दर्शन गरेका थिए। हिन्दु, बौद्धमार्गी र किरात गुरु हलेसी घुमिसकेका छन्।
किराती राजा शङखो हाङ, लेलिम हाङ, खाम्सो हाङ, बौद्ध गुरु पद्मसंभव, भुटानी राजा जिग्मे सिङे वाङचुक र हिन्दुका शंकराचार्य जयेन्द्र सरस्वती, स्वामी रामानन्द गिरी, मिर्चैया बाबालगायतले हलेसी दर्शन गरेका थिए।
साँच्चै हलेसीले मन चोर्छ। म फेरि त्यहाँ जानेछु, परिवारका साथमा।
काठमाडौंदेखि बनेपा–बर्दिबास सडकको खुर्कोट खण्डबाट मध्य पहाडी लोकमार्ग हुँदै घुर्मीबाट हलेसी पुग्न २१६ किमि। काठमाडौंको चाबहिल र कोटेश्वरबाट जीप छुट्छन्। जीपमा १० घन्टा।
६ हजार रुपैयाँ। यति रकमले काठमाडौं–हलेसी–काठमाडौं जीप भाडा तिर्न, दुई रात हलेसीमा बस्न, बिहान, दिउँसो र बेलुका खाना खान पुग्छ। कोसेलीलाई थप रकम चाहिन्छ।
टिसर्ट, हाफ पाइन्ट, स्पोर्टस् शु, पातलो ज्याकेट, टावल, चप्पल, ट्र्याक सुट, सनक्रिम, क्याप, कालो चस्मा, क्यामेरा, टर्च लाइट, दूरबीन, पानी बोतल जीवनजल, चकलेट आदि।
हलेसी बजारमा मस्याङ, भट्मास, खुर्सानी, बदाम, गुन्द्रुक, मास किन्न पाइन्छ। सुन्तला, नासपाती, कागती र निबुवा पाइन्छ। महादेव, पद्मसंभव र रैछाकुले झल्काउने कला आवश्यक छ।
हलेसी गुफामा ध्यान बसेर गुरु पद्मसंभव चिरञ्जीवी बने। हलेसी गुफा छेउमा मारातिका क्षिमेत ताग्तेन क्षोलिङ गुम्बा र गणेश मन्दिर छ। गुम्बामा शाक्यमुनि गौतम बुद्ध, अवलोकितेश्वर र पद्मसंभवका मूर्ति छन्। गुम्बाका प्रमुख खेन्पो कर्म वाङचुक शेर्पाका अनुसार हलेसी पवित्र तीर्थ हो। गुफालाई बौद्धमार्गी मारातिका मान्छन्। गुरु पद्मसंभव र मन्दरावदेवीको साधनास्थल। उनीहरूले आयु विद्याको सिद्धि प्राप्त गरेको ठाउँ।
पद्मसंभव सातौं शताब्दीको अन्त्यतिर हिमाली भेकमा बौद्ध धर्म फैलाउने गुरु हुन् भने मन्दरावदेवी साहोर सम्राट आर्शधरकी छोरी। उनीहरूले हलेसी गुफामा तीन महिना साधना गरी अमितायुस बुद्धको दर्शन पाए। अमितायुसले दीर्घ जीवनको कलश दुवैका शिरमा राखे। अमृतपान गराए। परिणामः उनीहरूको शरीर बज्रमा परिणत भयो। कहिल्यै जन्मन र मर्नु नपर्ने भयो।
पद्मसंभवभन्दा पहिले त्रिकुलनाथ (मन्जुश्री, आर्य अवलोकितेश्वर र बज्रपाणीले) ले पवित्र तुल्याएको भूमि हलेसी। त्यहाँ त्रिकुलनाथका नाउँमा पर्वत छन्। संसारमा बौद्धमार्गीका मुख्य ६ तीर्थ छन्। तीमध्ये एउटा मारातिका। अरू तीर्थमा बोधगया, पञ्चशिखर पर्वत, ओडियाना, श्याम्बला, रियो पोताला हुन्।
हलेसीमा मुख्य दुई गुफा छन्। बौद्धमार्गी पहिलोलाई शान्ति तीर्थद्वार मान्छन्, जहाँ पद्मसंभव र मन्दरावदेवीले साधना गरेका थिए। दोस्रो रौद्र गुफा, जहाँ साधनामा अवरोध पुर्यापउनेलाई दमन गरिएको थियो। हिन्दु यसलाई बसाहा गुफा भन्छन्।
गुफाभित्रका आकृतिलाई बौद्धमार्गी अमितायुस, धर्मपाला, स्वेततारा, विजयनी, पद्मसंभव, आयु कलश आदिका रूपमा पुज्छन्। बज्र आयुका लागि साधना गर्न मारातिका उपयुक्त तीर्थ। तीर्थद्वारमा आयु कलश छ। दुवै गुफामा अमृत जल छ।
गुम्बामा बौद्ध शिक्षा पढाइन्छ। ३५ लामाले आवासीय शिक्षा लिइरहेका छन्। यो गुम्बा लामा ङवाङ क्षोफेल ग्याछोले ०३७ सालमा बनाएका हुन्। मारातिका प्रख्यात छ। मारातिका प्रचारमा ग्याछो र ठूल्शिक रिन्पोछेको योगदान ठूलो छ।
ठूल–ठूला धर्म गुरु हलेसी आइसके। गुफामा बुद्ध जयन्ती, लोसार र बैसाखमा मेला लाग्छ। युरोप–अमेरिकादेखिका तीर्थालु आउँछन्। ‘ध्यान र पूजापाठका लागि तीर्थालु आउँछन्,' शेर्पा भन्छन्, ‘हलेसी दर्शनले पुण्य मिल्छ।'
संस्थापक, खोटाङ विकास मञ्च
हलेसी त्रिबेणीधाम हो। बुद्धि पुर्याचएर पूर्वाधार विकास गर्न सके हलेसीमा दिनमै लाखौं पर्यटक ल्याउन सकिन्छ। त्यसैले अर्खौलेको पुछारदेखि दुर्छिमको पहिरो माथिको बस्तीलाई तल सार्नु पर्छ। अनि तीन ठाउँमा हिन्दु, बौद्धमार्गी र किरातीको ठूल–ठुला ध्यान केन्द्र बनाउनु पर्छ। जहाँ एकै पटक हजारौंले ध्यान गर्न सकून।
उपाध्यक्ष, हलेसी व्यवस्थापन समिति
हलेसीको गुरु योजना बन्ने क्रममा छ। हलेसीमा ३ वटा धर्मशाला छ। यतिले पुग्दैन, सुविधायुक्त धर्मशाला बनाउन रकम जम्मा गर्ने उद्धेश्यले हामी चैत २० गतेदेखि शिव पुराण लगाउँदैछौं। बचत भएको रकम हलेसी क्याम्पसलाई पनि सहयोग गर्छौं। लोडशेडिङले हैरान भएका छौं। त्यसैले सोलार प्लान्ट जडान गर्दैछौं।
हलेसीमा खानेपानी समस्या चर्को छ। बजार व्यवस्थित छैन। मनपरि घर बन्दैछन्। घर निर्माण मापदण्ड चाहियो। घुर्मी तरेपछि उदयपुर र ओखलढुँगा जोड्न सुनकोसीमा पुल बन्दैछ। ओखलढुँगा र खोटाङ जोड्ने जयरामघाटको दुधकोसी पुल पनि बन्दैछ। त्यसैले बर्खामा हलेसी जान सकिँदैन। हिउँदमा मात्रै गाडी चल्छ।
मध्यम वर्गीयका कथा
प्रज्वल पराजुलीको नयाँ उपन्यास 'ल्यान्ड ह्वेर आई फ्ली' पढ्दै गर्दा मैले आफ्नै बूढी हजुरआमा सम्झेको थिएँ। उपन्यासकी आमा पात्रले मलाई उनको सम्झना दिलायोे।
आकाशमुनि ठिंग उभिएको छ, एउटा खुल्ला ढोका। ढोकाको वारि र पारि फैलिएको छ चौर र त्यसमाथि छ आकाशको छानो! 'निर्बन्ध मोन्टाज' निबन्धसंग्रहको आवरण यस्तो छ। पहिलोपल्ट पुस्तकको यस्तो आवरणकला देख्दा...
आत्महत्याको बीउ : मोन्सान्टो
मोन्सान्टो इन्डियाको वेबसाइटमा लेखिएको छ, 'मोन्सान्टो एक कृषि कम्पनी हो। हामी नयाँ प्रविधि र आविष्कारको माध्यमबाट विश्वभरका कृषकलाई धेरैभन्दा धेरै उत्पादन गरी उनीहरूको जीवनस्तर माथि उठाउन सहयोग गर्दछौं।' साइटका तस्बिरहरूमा...